Global Voices teny Malagasy » Niteraka fihetsiketsehana sy adihevitra ny fandraràna posiposy amin’ny làlan-dehibe any Dhaka, Bangladesh · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 25 Jolay 2019 7:15 GMT 1	 · Mpanoratra Samaya Anjum Nandika Salohy Randriafanomezantsoa
Sokajy: Azia Atsimo, Bangladesh, Fampandrosoana, Fanoherana, Fitantanam-pitondrana, Lalàna, Mediam-bahoaka, Politika, Tantara, Tontolo_iainana, Tsidika, Zon'olombelona
Fantatra amin'ny maha-renivohitry ny posiposy bisikileta  azy eto amin'izao tontolo izao i Dhaka, renivohitr'i Bangladesh. Nandritra ny dimampolo taona lasa teo, ny posiposy no tena hivezivezen'ny olona miala any an-trano mankany ampiasana ao Dhaka sy amin'ny dia tsy dia lavitra. Iray amin'ireo tanàndehibe  be mponina indrindra eran-tany i Dhaka ary efa ela izy no niady tamin'ny famehezana ny fitomboan'ny fifamoivoizana  .
Nanan-kery nanomboka ny 7 Jolay ny fandraràna ny posiposy  tsy handeha amin'ny làlambe anankitelo lehibe mba hanaovana ezaka hamahana ny fitomboan'ny fitohanan'ny fifamoivoizana ao an-tanàndehibe. Na dia izany aza, niteraka hetsi-panoherana avy amin'ny mpitarika posiposy  sy ny mpandeha sasany ny fandraràna. Nahatonga ny olona maro hiadihevitra momba ny olan'ny fifamoivoizana ao an-drenivohitra sy hametram-panontaniana momba ny tsy fisian'ny safidy ho an'ny mpandeha ny fanapahan-kevitra handràra ny posibisikileta amin'ny làlambe sasany.
Tombanana  ho misy posiposy miisa 600.000 eo ho eo ao an-tanàndehibe na dia latsaky ny 100.000 amin'ireo fotsiny aza no nahazo alalana. Manaja ny tontolo iainana izy ireo, miadana, ary tsy atahorana loatra amin'ny lozam-pifamoivoizana. Saingy mahatonga ny fifamoivoizana tsy mampino sy mihitsoka tanteraka ny fifangaroan'ny posiposy, ny posiposy misy maotera telo kodiarana, moto, ny bisy ary ny fiarabe eny an-dalana. Matetika no tsy misy ny lalana natokana ho an'ny fifamoivoizana miadana ho an'ity posiposy ity amin'ny ankamaroan'ny làlana ao Dhaka .
Nosakanan'ny manampahefana avokoa ny posiposy rehetra sy ireo posy misy maotera tsy nahazo alalana hafa, toy ny posy mandeha amin'ny vatoaratra amin'ny lalandehibe telo ary nanapa-kevitra  ny hanolo azy ireo amin'ny fanitarana tolotra bisy ny manampahefana.
Taorian'ny fanambarana, nivoaka ny adihevitry ny daholobe satria nidina an-dalambe ny mpitarika posy an'arivony  maro mba hitokona ary naneho ny ahiahiny tamin'ny alàlan'ny sehatra tambajotra sosialy ny hafa. Nandritra ny andro maromaro, nibodo ireo làlambe ireo mpanao fihetsiketsehana izay niteraka fitohanana mahery vaika ka nihitatra hatrany amin'ny faritra manodidina.
Nilaza  ireo mpitarika posy fa natao tsy nisy fanomezana fidiram-bola hafa na fandaharan'asa hanarenana ny fidiram-bola ho azy ireo ny fandrarana .
Ankoatra ireo mpitarika posy, nanatevin-daharana ny fihetsiketsehana ihany koa ireo tompony izay mivelona amin'ny fampiasana ireo mpitarika kodiaran-telo ireo ary nanao valan-dresaka an-gazety nametraka ny fanomezana ny fe-potoana farany amin'ny fanesorana ofisialy ny fandrarana . Nitaraina izy ireo fa tsy niresaka tamin'izy ireo ny manampahefana ary nametraka tsy ara-drariny ny fandrarana.
Naneho ny fahadisoam-panantenany  momba ireo olana atrehiny mandritra ny diany ihany koa ireo mpandeha ary nanolotra soso-kevitra hafa izay tokony ho raisina ankoatra ny (na mialoha ny) fametrahana ny fandraràna tampoka toy ny làlana natokana ho an'ny posiposy na ny famoronana rafitra fitateram-bahoaka tsara kokoa sady mametra ny isan'ny fiara mandeha eny an-dalana.
Nanoratra ilay mpisera Facebook Dewan Maruf Shuvo  hoe:
Amin'ny fanehoan-kevitra hafa , nanamafy ny tokony hananana “rafi-pifandraisana iraisana” mifototra amin'ny endrika fitaterana isan-karazany ny manam-pahaizana sy ny mpandrindra ny rafitra an-tanàndehibe sy ny filana ny safidy hafa mety hanoloana ny posiposy ho toy ny fomba fitateram-bahoaka.
Nikarakara ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety tao an-drenivohitra ny Ivontoerana ho an'ny Mpandamin'asa ao Bangladesh (BIP)  mba hiara-midinika ny vokatry ny fandrarana voalaza. Amin'izao fotoana izao, mitotaly eo ho eo amin'ny manodidina ny 40 isanjato amin'ny rafi-pitaterana ao Dhaka ny posiposy, miparitaka ny lazany noho izy tena ilaina.
Nanoratra i Sumon Khan , mpisera Facebook hoe:
Nanapongatra ny sasantsasany momba ny hevi-diso niseho tao amin'ny tambajotra sosialy i Mohammad Tauheed , mpiara-miasa tranainy ao amin'ny TED sady Akademika Mpandrindra ao amin'ny Ivontoerana Bengal :
Tsia mihitsy! 😒Mandehana tongotra fotsiny! Afaka handehanan-tongotra ny halavirana akaiky izay handehananao amin'ny posiposy.
Nandrisika ny mpitarika posy ny manampahefana mba hampiato ny fihetsiketsehana ary nanasa azy ireo mba hifanakalo hevitra bebe kokoa. Nivoady ihany koa izy ireo  fa hanafoana tanteraka ny posiposy ao Dhaka ao anatin'ny roa taona manaraka.
Tokony hisokatra amin'ny taona 2021 ny lalan'ny metro  Mass Rapid Transit (MRT) mirefy 20,10 kilaometatra ao Dhaka. Mandra-pahatongan'izany, mbola nofinofy ny vahaolana ho an'ny fifamoivoizana saro-bahana  ao Dhaka.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/07/25/141884/
 maha-renivohitry ny posiposy bisikileta: http://planetden.com/architecture/rickshaw-capital-world-dhaka
 Iray amin'ireo tanàndehibe: https://www.businessinsider.com/dhaka-bangladesh-most-crowded-city-in-the-world-2018-11?IR=T
 fitomboan'ny fifamoivoizana: http://archive.thedailystar.net/beta2/news/disentangling-dhaka-traffic/
 fandraràna ny posiposy: https://www.thedailystar.net/city/now-rickshaw-free-3-dhaka-streets-1766065
 hetsi-panoherana avy amin'ny mpitarika posiposy: https://www.dhakatribune.com/bangladesh/dhaka/2019/07/09/rickshaw-ban-rickshaw-pullers-continue-protest-block-rampura-road
 Posiposy Maroloko Voizin'olona No Mifehy Ny Araben'i Dhaka Renivohitr'i Bangladesh [mg]: https://mg.globalvoices.org/2016/06/09/83877/
 nidina an-dalambe ny mpitarika posy an'arivony: https://www.thedailystar.net/frontpage/rickshaw-ban-pullers-block-portion-dhaka-road-1768723
 fe-potoana farany amin'ny fanesorana ofisialy ny fandrarana: https://thefinancialexpress.com.bd/national/rickshaw-owners-association-gives-ultimatum-to-withdraw-ban-1562419477
 Naneho ny fahadisoam-panantenany: https://bdnews24.com/bangladesh/2019/07/08/rickshaw-ban-on-key-dhaka-streets-fails-to-ease-traffic-snarls-but-spells-sufferings
 Nikarakara ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety tao an-drenivohitra ny Ivontoerana ho an'ny Mpandamin'asa ao Bangladesh (BIP): https://www.thedailystar.net/city/news/rickshaws-responsible-40pc-dhakas-commutes-1770235
 Ivontoerana Bengal: https://bengal.institute/
 Nivoady ihany koa izy ireo: https://www.banglanews24.com/national/article/78057/Rickshaw-free-Dhaka-by-2-years-Atiq
 lalan'ny metro: https://en.wikipedia.org/wiki/Dhaka_Metro_Rail
 fifamoivoizana saro-bahana: http://m.theindependentbd.com/post/206725